Iindaba -Ungasenza njani isiCwangciso soShishino seMigubo elungileyo kuMveliso yeMveliso
Oomatshini bokugaya umgubo ophuhle kakuhle bazise utshintsho kwizityalo zokugaya umgubo, kwimakethi yomgubo wase China. Isityalo esikhulu sokugaya umgubo kubonakala ngathi sithathe indawo enkulu, kwaye ayisiyiyo nje ngenxa yemveliso ephezulu, banesicwangciso seshishini sokugaya somgubo esinzima ngakumbi kunezinye. Isicwangciso esifanelekileyo seshishini ayilolungelo leefektri ezinkulu, izityalo ezincinane neziphakathi zomgubo wokugaya zinokwenza okufanayo kwaye zixhamle kuzo. Njengoko izicwangciso zokugaya umgubo enkulu kunokuba ngakumbi ngakumbi kwaye ebanzi, ezi ngcebiso zilandelayo zivela enye mveliso phezulu lokusila umgubo e China.
Oomatshini bokugaya umgubo
1. Ulawulo lomgangatho wengqolowa yakho ekrwada: misela iqela lokuthengwa kwezinto ukukhangela ingqolowa enokufikelela kwimigangatho yemveliso yakho. Umzekelo-intsalela ye-pesticide yinto ebalulekileyo.
2. Inkqubo yemveliso yolawulo: ukumodareyitha isiphumo sokucoca ngalo lonke ixesha, yenza isigqibo ngobumhlophe kunye nomgangatho wokugaya womgubo, ukubeka esweni ukusebenza kwabasebenzi ukuthintela iziphene zezixhobo ezingeyomfuneko kunye neengxaki zokhuseleko.
3. Inyathelo ngalinye lokulungisa liya kwenziwa kumagumbi ahlukeneyo, ngale ndlela ungcoliseko oluvela kwenye indawo lunokuthintelwa.